Xiriirka khiyaanada ee Soomaaliya iyo Kenya | KEYDMEDIA ONLINE
Xiriirka khiyaanada ee Soomaaliya iyo Kenya
Tan iyo markii xorriyadda la qaatay, dalalka deriska la ah Bariga Afrika ee wadaagga xuduud dhan 682-kilomitir (423-mayl) waxay leeyihiin xiriir aan wanaagsanayn.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ku dhowaad lix bilood kadib, xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey Kenya iyo Soomaaliya ayaa dib loo soo celiyay, waxaana arinta kasoo shaqeysay Qatar.
Wuxuu u muuqday xiriirka mid markii horeba loo jaray dano shaqsi iyo olole doorasho oo Farmaajo ku gali rabay. Dowladda Federaalka ayaa horaantii bishan shaacisay inay dib usoo nooleysay cilaaqaadka Kenya, Nayroobi-na si wanaagsan ayey uga jawaabtay. Laakiin marka la eego gunta hoose, khilaafka ayaa weli jira.
Waxaa muuqata in labada dowladood ay Qatar ku qancinayeen go'aankooda, waxaa taasi caddeyn u ah inay Kenya maalmo kadib ku dhawaaqday inay joojisay diyaaradaha ka imaada iyo ku aada Soomaaliya mudo saddex bilood ah.
Labada waddan ee deriska ah waxay horumarin karaan xiriirkooda iyagoo ku saleynaya danaha labada dhinac, laakiin madaxda hogaamisa ayaa midba midka kale dagaal shaqsi kula jira iyagoo danahooda gaarka u xayiran yihiin malaayiin shacab ah.
Tan iyo markii xorriyadda la qaatay, dalalkan wadaagga xuduud dhan 682-kilomitir (423-mayl) waxuu ahaa xiriirkooda mid aan wanaagsanayn. Labada dhinacba waxaa soo dhexgalay khilaafyo soohdinta ah, dagaallo yaryar, iyadoo hadda khilaafkooda cirka isku shareeray kadib markii kiiska muranka badda soo ifbaxay.
Dadka falanqeeya siyaasadda iyo diblomaasiyasadda Geeska Afrika waxay sheegeen in xiriirka Kenya iyo Soomaaliya aysan sahlaneyn inuu si buuxda usoo laabto, oo dhameytiran laga gaaro khilaafka jira inta uu Farmaajo ka baxayo, oo dowladda cusub la wareegta Villa Somalia.
Kenya waxay aaminsan tahay in cida ay kala macaamileyso Soomaaliya ee sax ah ay tahay kaliya dowladda cusub ee lasoo dhisayo, taasoo suurta-gal ah inay wax ka bedesho siyaasadii Farmaajo ee ku aadan xiriirka dalalka deriska.
Labada wadan hadda waxaysan dib usoo celin safiiradooda, waxaa xiran safaaradaha ay ku kala leeyihiin Muqdisho iyo Nairobi, iyadoo diyaaradaha aysan shaqeyneynin, waxaa istaagay gacasigii isaga kala gooshi jiray labada dhinac iyo Qaadka Miiraa.
Uhuru oo cadaasia culus kala kulmaya beeralayda Qaadka ayaa ku adkaystay inuu sidan sii ahaado xiriirka Soomaaliya inta uu Farmaajo ka macsalaameynayo Madaxtooyadda, maadaama uu isaga dano shaqsi u jaray cilaaqaadka Nov 2020.